UJabra Elite 45h, umlingani ophelele we-teleworking [UKUBUYEKEZA] | Izindaba zamagajethi
UMiguel Hernandez | 01/05/2021 12:00 | Kubuyekezwe ku- 29/04/2021 13:16 | General, Izibuyekezo
Ezocingo Kulapha ukuhlala futhi kungena ngendlela yethu yokubona izinto, kangangoba iningi lethu selikhethe ukusungula ihhovisi elincane emakhaya ethu futhi sibonile ukuthi abaluleke kangakanani amagajethi ezimpilweni zethu zansuku zonke.
Jabra Ungungoti ekuhlinzekeni imikhiqizo yezingqungquthela zomsindo nevidiyo zazo zonke izinhlobo zabasebenzisi futhi kulokhu sizogxila kumkhiqizo osebenza kahle. TOSibheka ngokujulile ama-headphone we-Jabra Elite 45h angaphezulu kwezindlebe, alungele ukusebenza ngocingo onolwazi oluhle kakhulu, zithole nathi.
3 Ukuxhumana nokuzimela
Njengoba wazi, iJabra yinkampani esebenzisa ukukhiqiza imikhiqizo enezinga elisezingeni eliphakeme impela, kungukuhlangenwe nakho okufanayo esikutholayo nalokhu UJabra 45h. Ngokuphathelene nokupakisha, inkampani ihlale ibheja kwi-minimalism kanye nohlelo lwe-unboxing lwezimboni olusitshela lutho. Into yokuqala esimangazayo lapho sibakhipha ebhokisini ukukhanya kwabo okwedlulele nokuthi bazizwa bakhiwe kahle kangakanani, lezi zici zihambisana nabo ekusetshenzisweni kwansuku zonke. Uhlelo oluhle lokulungiswa kwamamilimitha ngaphandle kwe-creaking nangayo izindlebe ezingaphezulu kwezindlebe ezingacinisi kangako.
Ubukhulu: 186 * 157 * 60,5 mm
Imibala etholakalayo: Mnyama, Mnyama + Ithusi, Beige, Luhlaza okwesibhakabhaka, Brown, Mnyama + Isikhala Esimpunga
Ihlobene kakhulu neqiniso lokuthi ihedsethi yenziwe ngesikhumba sokwenziwa futhi i-padding igwebu lememori, ngenkomba ethi «L» ne- «R» yamba ngqo kubo. Sinesisindo esiphelele sama-gram ayi-160 kuphela, into emangazayo, ehambisana nobukhulu obuvinjelwe impela. Vele ibhokisi liletha ikhebula le-USB-C elizosetshenziselwa ukushaja idivayisi futhi alinamasentimitha angama-30 ubude, okusishiyele umuzwa omunyu ngokubheka ukuthi amahedfoni ngokwawo acishe abe amasentimitha angama-20 esewonke.
Siya ngqo kuzipikha ngasinye, kokubili kwesokudla nesobunxele banobubanzi obungamamilimitha angama-40, okungekubi nakancane. Zombili zinokumelana nomsindo womoya ozosisiza ukuba sibe nezingxoxo futhi silalele umculo kahle nangaphandle, into esiyiqinisekisile ukuthi isebenza kahle. Kwenzeka okufanayo ngomsindo ezincingweni, inemibhobho emibili ephethe ukwenza ngcono ukusebenza kwezwi lethu futhi ngaleyo ndlela siqiniseke ukuthi umamukeli uzwa kahle yonke into esifuna ukuyikhipha.
Umkhawulokudonsa wesipikha somculo: 20 Hz kuye ku-20 kHz
Umkhawulokudonsa wesipikha okhulumayo: 100 Hz kuye ku-8000 Hz
Imakrofoni ezimbili ze-MEMS
I-Bluetooth enezimbhangqwana ezimbili ngasikhathi sinye
Ngokumangazayo, futhi ngokungafani neminye imikhiqizo, i-firm iqinisekisa ukuthi idivayisi inewaranti yeminyaka emibili phambi kwamanzi nothuli kuwebhusayithi yabo, into engimangaze kamnandi. Kulesi sigaba kuncane okungadingeka ngobuchwepheshe kweJabra 45h ezakhiwe ngezinto ezinamandla amakhulu njenge-aluminium enezinsimbi kanye ne-silicone ngamafutha angasebenzi. Iqiniso ngukuthi ukusetshenziswa kwansuku zonke kuyaziswa ngokwenqaba okungeziwe okukunikeza konke lokhu.
Ukuxhumana kuzosuselwa ku- I-Bluetooth 5.0 kulokhu, ngazo zonke izitifiketi ezidingekayo zale njongo. Amaphrofayli e-Bluetooth abalulekile uma ulalele umculo futhi lapha sizithola singekho emsebenzini omkhulu ku-Qualcomm's apt codec, Kodwa-ke, sinezinto ezijwayelekile ezivela ku-Apple nezinye izinkampani: HSP v1.2, HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, PBAP v1.1, SPP v1.2.
Inkinobho ezinikezele yokuncenga i-Alexa, i-Siri, i-Bixby noma i-Google Assistant.
Ngokuqondene ne ukuzimela, Asinayo imininingwane yezobuchwepheshe ezingeni lomthamo webhethri ku-mAh. Khonamanjalo, inkampani isithembisa kuze kufike kumahora angama-50 omculo, into esikwazile ukukuqinisekisa ukuthi isondele kakhulu ekusebenzeni kwangempela kwamahedfoni. Kumele kuqashelwe ukuthi imbobo ye-USB-C inohlobo "lokushaja okusheshayo" oluzosivumela amahora we-10 wokuzibusa ngemizuzu engu-15 yokushaja, noma ucabanga ukuthi isikhathi sokushaja esiphelele nge-5W i-adaptha ye-USB-C yihora eli-1 nemizuzu engama-30, kubonakala kufana nokukhokhiswa okujwayelekile. Banendlela "yokulala" ezokwenziwa isebenze ngokuzenzakalela ukuthuthukisa ukusebenza kwebhethri lapho singazisebenzisi nokucisha okuzenzakalelayo ngemuva kwamahora angama-24 ngaphandle kokusebenzisa.
Njengoba kuvame ukwenzeka ngemikhiqizo ye-Shure, sithola ihedsethi elungiswe kahle. Ama-bass akagqami ngokweqile futhi singahlukanisa zonke izinhlobo zamathoni, yebo, kufanelekile ukusho ukuthi asikwazi ukufuna ngaphezu kwamanye ama-headphone ebangeni lawo lentengo. Empeleni, amandla wokukhanselwa komsindo wamahedfoni ayamangaza impela uma kubhekwa ukuthi "asezindlebeni" futhi awavaleli ngokuphelele indlebe yethu.
Imakrofoni isebenza kahle kakhulu ezingxoxweni ezinde, ngaphezu kwalokho, ihlukanisa umsindo wangaphandle ongaphazamisa noma uphazamise izingcingo. Lawa ma-headphone anesisindo esilula ngokweqile kanye nokuzimela okunonya okusiholela ngokushesha ekucabangeni ukuthi angaba inketho enkulu lapho sikhuluma ngokusebenza ngocingo. noma ukuchitha isikhathi eside ehhovisi ngaphandle kokwesaba ukufona. Azibangeli ukukhathala nasezindlebeni noma nasekhanda ngenxa yesisindo nezinto zazo impela hlangothi nokumelana, into engicabanga ukuthi kufanele ngiyigqamise kulokhu kuhlaziywa.
Njengoba sishilo phambilini, uma ufuna ukubalekela ama-headphone we-TWS lapho usebenza ngocingo noma uchitha izinsuku ezinhle zehhovisi ngaphandle kokuyeka izingcingo, lawa maJabra Elite 45h angumnikelo othokozisayo ngokwentengo yamanani wokuncintisana. Ungazithenga ngemali engaphansi kwama-euro angama-99 ezitolo ezijwayelekile ezifana ne-Amazon. Angikwazi ukuzibamba ngikhumbule ukuthi asinayo i-aptX futhi singabakhumbula, kanye neqiniso lokuthi ngasizathu simbe engingaqondi kahle banqume ukukwenza ngaphandle kwembobo ye-3,5mm Jack ukuthola ukuxhumana kwendabuko okwengeziwe.
Kuthunyelwe ku: May 1 we-2021
Ukulungiswa kokugcina: 29 Apreli 2021
Idizayini emelana nokunethezeka
Umsindo oshunwe kahle
Uhla lwamanani oluqinile
Izinkinobho ezinokuphathwa okunzima
Intambo engu-30cm USB-C
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » UJabra Elite 45h, umlingani ophelele wezokusebenza ngocingo
I-Fresh´n Rebel Duo Base, idizayini nokusebenza okuhlukahlukene ngokushaja okungenantambo